Iimpawu, ukhathalelo kunye nomdla wentlanzi yamabhabhathane | Ngeentlanzi
Intlanzi ibhabhathane iphakathi kweentlanzi ezincinci zolwandle. Inokufumaneka emanzini ashushu kunye nakumahlathi, kodwa namhlanje, akunjalo. Intlanzi ibhabhathane, igama lezenzululwazi Chaetodontidae, isengozini yokuphela.
Kule posi siza kuthetha ngayo yonke into enxulumene nale ntlanzi intle singenako ukuyonwabela kuba abantu bayo baphantsi kakhulu. Banokubona kuphela amaxwebhu kunye neemagazini zesayensi. Ngaba uyafuna ukwazi isizathu sokuba babe semngciphekweni wokuphela?
2 Inkangeleko kunye nendlela yokuphila
3 Uluhlu kunye nendawo yokuhlala
4 Ibhabhathane kwiintlanzi zasemanzini
Ngokuyintloko, ezi ntlanzi zincinci kakhulu ngobukhulu. Sinokuzifumana kwimithombo yeekorale zidada emanzini ashushu nakweleenjiko. Ekuboneni kokuqala banokuchaneka ngokugqibeleleyo. Umzimba uqaqambile otyheli kwaye unemibala kakhulu. Inemveliso ethile eyinika into ekhethekileyo. Ngesi sizathu, ifumana igama lentlanzi yebhabhathane.
Namhlanje, zingaphezulu kwe-100 iindidi ezaziwayo zentlanzi yamabhabhathane. Zisasazwa lulwandlekazi lweAtlantic, iIndiya kunye nePasifiki. Ihlala emanzini anetyuwa kuphela. Ukuba mncinci kakhulu, umlinganiso wayo zii-intshi ezine ubude. Kunqabile ukuba ifike ngaphezulu kweesentimitha ezili-10 ubude.
Kuyaziwa ukuba ezinye iintlobo zebhabhathane zingafikelela kubude obukhulu. Ukuba bahlala kwii-aquariums kwaye banikwe ukhathalelo abaludingayo, banokuphila ukuya kuthi ga kwi-10 leminyaka. Nangona kunjalo, kwindawo yayo yendalo, baphila kuphela iminyaka esi-7.
Uninzi lwama-aquarists lwakha lwafuna ukukhathalela ibhabhathane. Ubuhle bayo obungenakubalwa bunokonwatyelwa ukuba bunyanyekelwa ngokufanelekileyo. Nangona kukho ingxaki. Ezi ntlanzi kunzima kakhulu ukuzihoya. Ifuna iimeko ezithile zamanzi kunye nokubeka iliso rhoqo. Ke ngoko, kuyacetyiswa ngakumbi ukuba ezi ntlanzi zinemiqathango ethile eziyinikwa ngendalo kwindawo yazo yokuhlala.
Inkangeleko kunye nendlela yokuphila
Ngamanye amaxesha kuyabhidaniswa ne Ingelosi yentlanzi, kuba zinemibala efanayo, kodwa incinci kakhulu. Amabala amnyama emzimbeni wayo sesona salathisi sihlukileyo sokujongana neebhabhathane. Ikwahluka kwi-angelfish kuba umlomo wayo ujonge ngakumbi kwaye inamaqhina amnyama ajikeleze amehlo ayo.
Ngokwesiqhelo, Ziintlanzi ezibuya ngxi, ke zondla emini kwaye ziphumle kwiikorale ebusuku. Ukutya kwabo okusisiseko kushwankathelwe kwiplankton ephuma emanzini, kwii-coral kunye nee-anemones kunye nezinye ii-crustaceans.
Iintlobo ezinkulu zihlala zodwa. Banobuntu bodwa. Oko kukuthi, banamaqabane omnye kuphela abatshatayo ubomi babo bonke okanye ade afe.
Zilixhoba lezilwanyana ezininzi ezizama ukuzizingela. Enye yazo yi Ingcuka yentlanzi. Ikwayinyama yee-snappers, ii-eels, kunye nee-shark. Enkosi ngobukhulu bayo obuncinci bayakwazi ukuzimela kwezi zilwanyana zize bazifihle. Benza kwimingxunya yekorale ukuze babaleke kwaye baphephe ukutyiwa.
Emva kwexesha zibhityile kwaye imo yomzimba wazo ime okweqanda. Impumlo yayo iqhubekile kwaye iyivumela ukuba ihambe phakathi kwamatye e-coral reef. Ngaphakathi ematyeni bayakwazi ukufumana ukutya kwabo. Umva wayo oqhubekayo kwaye umsila ujikelezwe. Ayizange ibe neemfoloko.
Nangona uninzi lunemibala eqaqambileyo, kukwakho nemizobo emnyama. Kodwa zihlala zihlala zigqamile mnyama, mhlophe, bomvu, luhlaza, orenji, namthubi.
Ngaphambi kokuba babe sengozini enkulu, ezi ntlanzi zafunyanwa kuwo onke amalwandle ehlabathi. Ubuninzi bayo bungene Amanzi akweleenjiko, akweleenjiko kunye namanzi ashushu.
Ngokuphathelele indawo yabo yokuhlala, bathanda ukuhlala kufutshane namatye kunye neekorale. Amanzi enzonzobila adadayo zihlala zingaphantsi kweemitha ezingama-20. Ezinye iintlobo zebhabhathane ezikhetha ukuhlala kubunzulu obufikelela kwiimitha ezili-180.
Emini zifumaneka zisitya kufutshane nemifula. Kulapho bafumana ukutya kwabo kunye nendawo yabo yokufihla kumarhamncwa. Ebusuku ziyadada zinqumla kwimifula yokulala ukuze ziphephe ukuzingelwa.
Nangona uninzi lwezi ntlanzi lodwa, ezinye zifumaneka ngababini. Kuphela zezinye zazo ezinokufunyanwa zisenza amaqela amakhulu ukuba atye kwi-zooplankton. Iibhabhathane zeCorellivorous zihlala zenze izibini ezitshatileyo kwaye zibanga intloko yekorale njengekhaya labo, ziba yindawo enkulu kakhulu.
Ibhabhathane kwiintlanzi zasemanzini
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iintlanzi zamabhabhathane ziyakwazi ukuphila ixesha elide kwiitanki zentlanzi kunakwindawo yazo yendalo. I-aquarium kufuneka ilinganise indawo yayo yendalo, nangona sibeka ingqaqa Iya kuyincinda de iphule.
Uninzi lwazo lunokondliwa ngokulunika i-algae, isiponji kunye neekorale. Abanye banokondla izilwanyana ezincinci kunye neplankton, njengoko ziyi-omnivores. Kuya kufuneka banikwe uluhlu olubanzi lokutya okuphilayo okunjengeeflakes, i-brine ephilayo, ukutya okubandayo kwazo zonke iintlobo, kunye ne-spirulina. Kukho ukutya okugcinwe kwisiponji okunokukunceda ekutyeni. Ezi ntlanzi zinochuku kakhulu kukutya. Ukuba ayondli kakuhle, inokufa ngokulula.
Iintlanzi ezincinci kulula ukuba ziqhelane neemeko zetanki. Kufuneka bondliwe amaxesha ngamaxesha ngemini ukuze bakwazi ukukhula kakuhle. I-aquarium abayifunayo kufuneka ibe nkulu ngokwaneleyo ukubanika indawo. Bafuna iindawo ezininzi neekona apho zingafihlwa khona. Oku kwenzelwa ukulinganisa indawo yokuhlala yendalo. Baneentloni ekuziphatheni, ke kufanelekile ukuyibeka ngamaqabane azolileyo nangenabundlobongela.
Ezi ntlanzi zizodwa okanye zihamba ngababini. Nangona kunjalo, xa besiya kwiqela baba yingozi. Kungcono ungabeki iisampulu ezininzi zeentlobo ezifanayo kwi-aquarium.
Malunga nokuzala, khange sithethe ngayo kuba khange bakwazi ukuzaliswa ngempumelelo ekuthinjweni. Kulindeleke ukuba bafunde ukubazalela ekuthinjweni kwaye baziqhelanise ngokugqibeleleyo nendalo.
Ngolu lwazi unokufumana enye yezona ntlanzi zinomdla kwihlabathi ubunzulu. Ngaba ukhe wayibona nayiphi intlanzi yamabhabhathane ngaphambili?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yebhabhathane
Ityuwa yamanzi eselwandle